I-Casa das Malhadas - I-Airbnb
I-Casa das Malhadas
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCarlota
Casa das Malhadas behlelo impahla endala lezolimo, ngoku ezizimeleyo, apho iimeko ezigqwesileyo iintsuku angenakulibaleka bahlanganisene kule isithuba efanelekileyo ngenxa veki, getaways elifutshane okanye ngeeholide emaphandleni, lokuphumla nokuba ukuzonwabisa, nosapho kunye nabahlobo. Nendawo amahle iimbono zasemaphandleni, apho unokuhamba khona, ukukhwela ihashe, inqwelo, ibhayisekile, ukufunda ngaphandle, ukuphumla ngasechibini okanye egadini, ukuhamba ngesikhephe kuMlambo iTagus.
Casa das Malhadas ise ifama yezolimo kwinkulungwane ye-19, ngoku ingaguqulwa njani na ibe endlwini ezimeleyo apho iimeko ezigqwesileyo iintsuku angenakulibaleka bahlanganisene kule isithuba efanelekileyo ngenxa veki, getaways okanye ngeeholide emaphandleni, ukuba bakhululeke kwaye wonwabe nosapho kunye nabahlobo .
Yindawo enamaphandle amahle, apho unokuhamba khona, ukhwele ihashe, ngenqwelo, ngebhayisekile, ufundele ngaphandle, uphumle ngasechibini okanye egadini, uhambo ngesikhephe ecaleni koMlambo iTagus kunye neelwandle ezikufuphi zoMlambo.
Unokwenza ukuloba kunye nokuzingela kwezemidlalo, imisebenzi enzima kunye nokunye okuninzi ...
Ikufuphi neendawo ezinkulu zenkcubeko ye-gastronomic kunye nembali, njenge-Almeirim Santarém, Fátima, Tomar, Almourol ... kunye ne-84km ukusuka eLisbon.
4.75 · Izimvo eziyi-13
Idolophana yase-Alpiarça, apho sikhoyo, yidolophana yezolimo, kodwa ngezizathu ezininzi zokutyelela, njengezinye iifama ezijikelezileyo apho unokwenza iWine kunye neendlela zokuzingela, iimyuziyam, amadama, iindawo zokutyela kunye nokunye okuninzi ukutyelela.
Ikufuphi neendawo ezinkulu zenkcubeko ye-gastronomic kunye nembali, njengeAlmeirim Santarém, Fátima, Tomar, Almourol...
7 km ukusuka ALMEIRIM
I-14 km ukusuka kwi-SANTAREM, ikomkhulu lesithili
Iikhilomitha ezingama-88 ukusuka eLISBON
Iikhilomitha ezingama-30 ukusuka eGOLEGÃ
Iikhilomitha ezingama-50 ukusuka kwa-TOMAR
79 km CASTLE DE BODE
I-47 km ukusuka kwi-CASTELO DO ALMOUROL
Iikhilomitha ezingama-70 ukusuka eCALDAS DA RAINHA
69 km ukusuka FATIMA
I-123 km ukusuka eCOIMBRA
Unxibelelwano lwam neendwendwe luphelele, njengoko ndithanda ukudibana nabantu abatsha kunye nokudala ububele obukhulu.